Ampy ho anao ny vokatra sy nyototra omena anao?
Tapaka ihany ianao fa nanapa-kevitra fa haka an’io goavambe io ary hiasa ho an’ny tenanao. Na izany aza, raha vao manomboka ny voalohany, ny olona dia manana fironana tena manasongadina izay tena vidiny, indrindra raha mikasa tranonkala izay manome tolotra manokana na vokatra virtoaly ianao.
Jen Conner, namana akaiky ahy izay mpanakanto mahaleotena nandritra ny dimy ambin’ny folo taona lasa izay, dia nizara ny traikefany voalohany tamin’ny zavakanto ary niezaka ny hametraka sanda amin’ny tetikasa:
Raha vao nanomboka nanao an-tsofina ho an’ny olona eo an-toerana aho dia tsy hitako izay tokony hamerenako azy. Natahotra aho raha toa ka nandoa ny fotoana tena lanjan’ny zanako aho fa tsy handray ahy izy ireo. Sako, manao zavakanto matihanina aho. 45 centai nedeja nataoko afa-tsy ny iray tamin’ny asako voalohany. Tamin’izay no tsapako fa fotoana izao handinihana ny vidin’ny kainų nustatymo nėra.
Nanao hadisoana mitovy aho tamin’izaho nanomboka namorona tranokala sy nanao fanoratana votoaty. Satria tsy pasirinktio antoka hoe ahoana no hanombatombanana ny halavany amin’ny famitana tetikasa iray, nefa ny mpanjifa mety hila nindramina dia nohamaivaniko izay tokony andoavana vola. Rehefa tonga amin’ny faran’ny tetikasa lehibe ianao dia manangona ireo isa ary mahatsapa fa afana nanao mihoatra ny karama farany ambany ianao dia mianatra lesona sarobidy momba ny vidiny.
Antenaina faina amhatoratra ity dia hanampy anao hametra ny am’ny fitomboana ho an’ny vokatra sy ny serivisinao amin’ny andro voalohany sokafy ny blôginao na ny orinasa ary tsy ho afaka hiatrika ireo olana ireo ihany izahay sya.
1 Inona no henoin’ny hafa?
1.1 Skaitmeniniai produktai
2 Ny zava-misy prieplauka
3 Karoka fototra ho an’ny endri-tserasera iombonana
3.1 elektroninės knygos
3.2 „Lesonos video“ / „Atrikasa“
4 Fantaro ny sarany
Inona no henoin’ny hafa?
Rehefa manapa-kevitra amin’ny rafitra fanamafisana fototra, jereo ny zavatra ataon’ny hafa ho an’ny tolotra na zavatra mitovy amin’izany.
Ohatra, azonao atao ny mandeha any aminnyny tranokalan’ny mpifaninana aminao ary ho hitanao fa mandoa $ 20 / therayy mandritra ny fanofanana ho an’ny tena manokana. Na izany aza, manana traikefa bebe kokoa ianao 10 an-tsaha mihoatra noho izy ary manana mari-pahaizana efa mandroso ianao. Mazava ho azy fa mety handoa vola kely fotsiny ianao amin’ny serivisy.
Tena zava-dehibe tokoa ny manao lisitra antsipirihany ny ain’ny olona ao amin’ny faritra na niša anao. Tsy te-hiakatra be loatra amin’ny tenanao ianao raha tsy mahazo asa. Ianao koa dia tsy te-hanome vidiny ny tenanao ho ambany loatra satria miasa pensai amin’ny ora ianao.
Ny fomba tsara hahazoana vidim-piainana ho an’ny vokatra azo amidy amin’ny fivarotana dia ny hampitombo ny vidin’ny vidin’ny 1.5.
Amin’ny farany, vokatra dia somary sarotra kokoa noho ny serivisy / entana nomerika satria azo inoana fa mifaninana amin’ny fivarotana lehibe toa ny Amazon.com are na ny fivarotana biriky sy morte aza. Tsy maintsy mandanjalanja ianao hoe ohatrinona no vonona handoa. Mety ho tsara ny farafaharatsiny misy fangarony vokatra sy kojakoja nomerika hisoratra anarana ho an’ny fandaharan’asa mifandray ka somary kely loatra ny saram-bolanao ary misy tombony rehetra ny varotra rehetra.
Naujų vaizdų nomerika dia mihoatra ny ohatry ny fotoana misy anao. Mila mandinika kaplis inona ny lanjan’ny fampahalalana ny mpanjifa. Tsy azo atao ihany koa ny haminavina ny ho fivarotanao. Iray volana, mety hivarotra ero 100 sy ny 2 manaraka ianao.
Na dia mihena aza ny fiovan’ny fifamoivoizana maharitra miaraka amin’ny demografika tena lasibatra, dia tsy afaka mifehy firy ireo boky hividianana olona ianao satria misy karazany maro samihafa izay milalao amin’ny famitana. Na dia ny volana hitanao amin’ny sarin’ireo varotra dia afaka mitondra fiovana.
Ny zava-misy prieplauka
Fahafantarana an-tsokosoko ny varotra fa tokony hanome vidiny foana ianao amin’ny marika 99 centų noho ny marika dolara manontolo. Na fahasamihafana dia tsy misy, fa ho gaga ianao hoe firy ny olona mijery ny vidin’ny $ 9.99 ary mieritreritra fa eo ambanin’ny $ 10 fa fay manodikodina.
KISSmetrics dia nijery akaiky ny psikolojika tao ambadiky ny vidin’ny vidiny ary nahita fa miasa io tetika io. Amin’ny fampiasana ny hern’ny fomba 9 manerana fikarohana samihafa 8, dia hitan’ny mpikaroka izany Ny fivarotana dia nitombo tamin’ny 24%.
Nanohy nanao fanandramana ny MIT sy ny Oniversite and the Chicago ary nahita fa ny vidia miaraka amin’ny isa 9 ao amin’izy ireo dia tena mampihena ny vidiny hafa, na dia mihena aza ny vidiny hafa. Nisedra ny fitafian’ny vehivavy izy ireo amin’ny $ 34, $ 39, ary $ 44. Ny entana 39 $ dia mivoaka ny hafa.
Na, fialan-tsasatrao amin’ity dia raha saika 9 USD nyina, tokony hampakatra ny vidin’ny $ 9,99 ihany ianao. Mety hivarotra tsaratsara kokoa, na dia manakarama dolara aza ianao.
Ohatra amin’ny tena fiainana: „InMotion Hosting“ nanavao ny vidy ao amin’ny 2018. Mariho hoe firy ny "9" ne misy eo amin’ny marika /
Karoka fototra ho an’ny endri-tserasera iombonana
Nauja vokatra irayan’ny tompon’ny tranonkala hamidy amin’ny mpamaky azy dia ny ebook. Ny saran’ny e-knygos su nauja mpitarika dia mety tsy mitovy karama, arakaraka ny votoatiny, ka tokony hianatra izay ambaran’ny mpifaninana aminao amin’ny vokatra nomerika.
„Ny World Book World“, paskelbtas 2013 m. Gegužės mėn., Tačiau neleidžiamas salanisan’ny vidin’ny mpivarotra ebook dia eo anelanelan’ny 3,00 USD už 7,99 USD ary tafiditra ao anatin’ny foronina. Malonus, amyny amnny alàlan’ny toeram-pivoahana nentim-paharazana žaislas Ny Barnes & „Noble Nook“ turi „Amazon Kindle“. Mety ho hitanao fa mifanakaiky akaiky ny nori’ny $ 10 ny mpifaninana aminao amin’ny vokatra nomerika.
Na dia tsara aza ny manana fitits-pitondran-tena amin’ny vidiny, aza mamela ny tenanao ho tonga pigeonholed. Raha ianao irery no olona manana fahalalana manokana iš fahaiza-manao manokana izay tadiavin’ny olona hianatra bebe kokoa momba izany, am amboary ny vidinao.
„Lesonos video“ / „Atrikasa“
„Tamin’ny volana Aogositra“, 2014 m., Dorrie Clark, nanoratra lahatsoratra iray ho an’i „Forbes“, turintis omenyje ne Sasany tamin’ireo ny vidin’ny saram-pianarana an-tserasera. Mpitsikaroka, žaislas su mpanolotsaina ara-bola iray nindramina avy amin’ny $ 47- $ 197 ho an’ny orra 2-3.
Raha mampiasa sehatra toy Udemy ianao ary manana traikefa goavana sy tsara, dia mety ho $ 10,000 amin’ny vola miditra.
„Araka ny Entrepreneurs“, manau, kad manoma, kad šiuo metu nėra pinigų 40 USD, o 60 USD yra „isan’ora ho an’ny fahaiza-manaonao“ (eny, am aminnyny aterineto na amin’ny fivoriana an-tariby).
Mandritra fotografijos nuotraukos, pinigų mitady hevitra manokana mama servitut IT ianao dia mety handoa vola gribu’ny fidirana ao amin’ny 175 $ isaky ny orra ary mihoatra ny $ 294 ira or miaraka amin’ny traikefa.
Fantaro ny sarany
Irena ohatra voalaza etsy nesąžiningumas dia manome teboka anao hanapa-kevitra izay tianao handoa, fa amin’ny farany dia mila manandrana ny tsenanao sy ny demografika tianao hitranga raha toa ka hiasa ho an’ny indostriananao sy ny orinasan-tsaranao izany..
Rehefa nandeha nauja foto, dia tokony ho hitanao mazava tsara hoe inona no vidin’ny tsena izay mitondra anao mbola manome anao fiainana azo ekena.
Tapaka ihany ianao fa nanapa-kevitra fa haka an’io goavambe io ary hiasa ho an’ny
클레오 트위터 바이오스 izay hahatonga anao handeha Oooh sy Aahh
트위터 트위터 angamba no iray amin’ireo ireo sehatra media sosialy matanjaka indrindra ankehitriny, nefa
Na efa nianatra tany amin’ny oniversite eo an-toerana ianao, rehefa namorona tranonkala nandritra ny
Ahoana geen Mamorona tranonkala-coupon amin’ny WordPress?
Ny toerana misy ny tapakila dia mahafinaritra! Iza no tsy tia zavatra maimaim-poana na
Ny toerana misy ny tapakila dia mahafinaritra! Iza no Tsy tia Zavatra Maimaim-Poana 나
Pandai Twitter Bios Okuya Kukwenza Uhambe Oooh noAahh
Alius est autem quam Movere tuum Web Hosting Web Hosting (et cum se scire artem)
Улучшите ваш редакционный рабочий процесс в мультиавторских блогах WordPress
На Википедији се налази нешто више о вебхостинг фертелле-у
15 ع عم ، ر ،، ،، ء، ،، ،ر رر ررد دددت ددت تتر ر
25 starannie dobranych nieruchomości WordPress
Waar u betaalde Blogger-kansen kunt vinden
Quandu hà stabilitu un impurtante Imej di WordPress?
Превратите комментарии в темы форума на WordPress
Topp 8 plugins for sosial deling Kay WordPress
Sammenlign Topp 5 WordPress Backup-plugins
5 grote redenen waarom bloggers zelf een boek zouden moeten publiceren
Ghid de bază HTML pentru manechine
Паметни Твиттер Биос Окуиа Куквенза Ухамбе Ооох ноАахх
Пли малбонај Ретеј-Ерарој: 10 Екземплој де Малбонај Ретејој
Melhores sites pessoais que eu já vi (e como criar o seu)
ر م س س م م م V V V V V V V V: V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V: V V V V V: V V V V V Vهص م مPSPSPS VPS
Тильмаанта HTML ee loogu talagalay Dumniya
워드 프레스 기본 특집 이미지 이모 지?